भेट्रान निर्देशकको रोजाई रणवीर, आगामी सबै सिनेमा प्रतिक्षित
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – बलिउड स्टार रणवीर सिंह आउने दिनका सुपरस्टार हुन् । मिहिनेत र अभिनयबाट सबैको ध्यान खिच्न सफल रणवीर भेट्रान निर्देशकको पहिलो रोजाई भएकाले, यसले भविष्यको सुपरस्टार
काउन्टडाउन सुरु, ‘होस्टेल’ देखि ‘कृ’सम्म अनमोल
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अनमोल केसी नेपाली बक्सअफिसका लिडीङ लिडर हुन् । यसमा कुनै सङ्कोच छैन । डेब्यु देखि अहिले पाँचौ सिनेमाको रिजल्टमा छन् अनमोल । पाँचौ सिनेमा ‘कृ’सम्म
काठमाडौँ — भ्यात्त पेट निस्केका, मंगोलियन अनुहारका दयाहाङ राईलाई ‘लुट’ बाट निर्देशक निश्चल बस्नेतले गोप्ले चरित्रमार्फत आम चिनारी दिए । अझ अघि बढेर निर्देशक रामबाबु गुरुङले त दयाहाङलाई काजीको भूमिकामा ‘कबड्डी’
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – डिसेम्बर २९ तारिखमा ‘शत्रु गते’को ‘रुपै मोहनी…’ बोलको गीत रिलिज भयो । त्यसको दुई दिन पछाडी ‘कृ’को ‘यति यति पानी’ पनि रिलिज भयो । निक्कै
कसले तिर्ला प्रियंकालाई ११ करोड ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – प्रियंका कार्की अहिलेकी सर्वाधिक व्यस्त व्यस्त अभिनेत्री हुन् । वर्ष भरि प्रियंकाकै सर्वाधिक सिनेमा रिलिज हुँदा उत्तिकै मात्रामा नयाँ सिनेमा पनि गर्ने गरेकी प्रियंकाले प्राय:
बक्सअफिस: वर्षका टप १० सिनेमा
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – वर्ष २०१७ को विश्वव्यापी स्वागत भैसकेको छ । सिनेमा क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपाली पछी नजिकको लाग्ने बलिउड (बम्बै सिनेमा क्षेत्र) नै हो । त्यसैले अंगेजी
बोर्डमा पार्टी राजनीति !
गठन भएदेखि राजनैतिक भर्ती र खिचातानीको थलो बन्दै आएको चलचित्र विकास बोर्डमा यसपालि पनि पार्टी राजनीति हावी हुनपुगेको छ। सरकारले ११ दिनअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोर्ड अध्यक्षका रूपमा फिल्म व्यवसायी तथा
सस्तो चर्चा कहिलेसम्मलाई ?
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – यो वर्ष व्यवसायिक सफल भएका सिनेमालाई प्रचारप्रसारले पनि राम्रै फाईदा पुर्यायो । व्यापारिक सफलता हाँसिल गर्न प्रचारले सिनेमालाई सहयोग पुर्याउछ । त्यसको लागि सिनेमामा दर्शक
५२ पुगे ‘टाइगर’, यस्तो रह्यो सलमानको करियर !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – आज तदनुसार डिसेम्बर २७ मा बलिउड अभिनेता सलमान खानको जन्मदिन परेको छ । सलमान आजैकै दिन ५२ वर्ष अगाडी पिता सलिम खान र माता सुशिला
सय करोड क्लबको ‘टाइगर’ बनाउने १२ सिनेमा !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अभिनेता सलमान खान बलिउड बक्सअफिसका लागि बादशाह नै मानिन्छन् । पछिल्लो ७ वर्षलाई हेर्दा उनका ९५ प्रतिक्षत सिनेमा बक्सअफिसमा सफल भएका छन् । कुनै सिनेमाले
‘टाइगर जिन्दा हे’का लागि ५ बक्सअफिस चुनौती !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – सलमान खान र कट्रिना कैफ स्टारर सिनेमा ‘टाइगर जिन्दा हे’ले घरेलु बक्सअफिसमा पहिलो दिन ३३.७५ करोड भारुको कारोबार गर्यो । यो वर्ष बलिउड सिनेमाको लागि
२४ घण्टामा सर्वाधिक हेरिएका ५ ट्रेलरहरु
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – तीव्र गतिमा बढिरहेको इन्टरनेट संजाल र बढ्दो युवा जनसंख्याका कारण नेपालमा युट्युब प्रयोगकर्ता संख्यामा पनि वृद्धि भैरहेको छ । यसको उदाहरण पछिल्लो समय ट्रेन्डीङमा पर्ने